Chat – Category – Android – Vessoft
Chat – Android
Chat Network Bulshada Si sahlan ay u isticmaalaan Rasuul inay isgaadhsiin la yeeshaan saaxiibadood ka shabakadaha bulshada caanka ah. Software wuxuu taageeraa wicitaanada cod iyo video iyo sidoo kale hab video shirka.
Chat Network Bulshada Mid ka mid ah Rasuullo ugu caansan si ay ula xiriiraan dadka isticmaala oo dunida ku. Software wuxuu taageeraa is-dhaafsiga files of noocyo kala duwan iyo isgaarsiinta ee CHAT kooxda.
العربية, English, Українська, Français... imo 9.8.000000003781
العربية, English, Українська, Français... Snapchat 9.42.3
Chat Webcams Qalab ku haboon isgaarsiinta iyo wadaagidda macluumaadka. Feature ugu weyn ee software-ka waa awooda u soo dirto sawiro in baaba'aan muddo kaddib.
العربية, English, Français, Español... Coco 7.5.4
Chat Isgaarsiinta Voice Qalabka ayaa in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka iyo codka. Software ayaa awood u ku xidhiidhiyaa CHAT group iyo dhaafsadaan faylasha ama macluumaad la xiriir.
العربية, English, Українська, Français... Telegram Desktop 3.14
العربية, English, Español, Deutsch... Kik 8.8.1.2261
العربية, English, Français, Español... KakaoTalk 5.3.3